သတိရလိုက်ပါ – စာအုပ်မြို့တော်
by MM Book City · May 7, 2019
လူတော်တော်များ ယုံကြည်ချက်လွန်ကဲလို့ ရှုံးနိမ့်နေကြတာပါ။ ထူးဆန်းသွားပါသလား?
ဟုတ်ပါတယ် လွဲမှားစွာ ယုံကြည်ခြင်း “False Belief ” လို့ခေါ်ပါတယ်။
Coca Cola ဆိုတဲ့ နာမည်ကို မကြားဖူးတဲ့လူ တော်တော်နည်းပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့ ဒီအချိုရည်ကို စထုတ်တဲ့လူကို လူချမ်းသာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးလို့ သိထားကြပါလိမ့်မယ်။
တကယ်စခဲ့တဲ့လူက ဆေးဝါးပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာ မတော်တဆဖော်စပ်မိတဲ့ အချိုရည်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်နီးချင်းတွေကို တစ်ခွက်ကို ၅ဆင့်နဲ့ စရောင်းခဲ့ပါတယ်။ အမှန်ပါပဲ.. စရောင်းတဲ့ ပထမဆုံးနှစ်မှာ ၂၅ဘူးသာရောင်းရပြီး ၀င်ငွေ ၅၀ဒေါ်လာနဲ့ ကြော်ငြာခ ၇၅ ဒေါ်လာကုန်ခဲ့ပါတယ်။ သဘောကတော့ ခွက်ခွက်လန်အောင်ရှုံးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်အနည်းငယ်ကြာတော့ အဲဒီအချိုရည်ကို လူချမ်းသာ တစ်ယောက်က ဒေါ်လာ ၂၃၀၀ နဲ့ပြန်ဝယ်ခဲ့ရာကနေ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိထားတဲ့ Coca Cola ဆိုပြီးဖြစ်လာပါတော့တယ်။
✔ ပထမတစ်ခုက သေးသေးလေးကစတင်ရလို့ သေးသေးလေးပဲဖြစ်မယ်မထင်ပါနဲ့။ လူတွေထင်နေကြတာက ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရဖို့ ခပ်ကြီးကြီးအရာတွေကနေစရမယ်လို့ ယုံကြည်နေကြတာပါပဲ။ ဒါဟာအပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ False Believe ရဲ့ အကောင်းဆုံးသာဓကပါပဲ။
✔ ဒုတိယတစ်ခုကို မပြောခင် မေးစရာရှိတာက ပထမဆုံးနှစ်မှာ ၂၅ဘူးပဲရောင်းရတဲ့ အချိုရည်ကို သင်ဆိုရင် ဆက်ရောင်းမှာလား? သင်ခန်းစာကတော့ လူတွေထင်ကြတာက ရလဒ်ကောင်းတွေမြင်မှ ရှေ့ဆက်ဖို့ ခွန်အားရှိမယ်ပေါ့။ တကယ်က ရှေ့ဆက်သွားမှ ရလဒ်ကောင်းတွေ ဖြစ်လာမှာပါ။
✔ နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာကတော့ Coca Cola လိုအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းကို ၂၅ဘူးပဲရောင်းရလို့ လက်လျှော့မယ်ဆိုရင် ဘာဆက်ဖြစ်သွားမလဲ? ဘာမှဆက်မဖြစ်ပါဘူး။ တခါတလေ သင့်အကြံဥာဏ်၊ လုပ်ရပ်တွေ မှန်ကန်ကောင်းမွန်နေပေမဲ့ လူတွေဆီက ချက်ချင်ကြီး ထောက်ခံအားပေးမှုရမယ်လို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ တချို့အရာတွေက အချိန်နဲ့ နည်းလမ်းလိုပါတယ်။
မိတ်ဆွေတို့ကော ဘာသင်ခန်းစာတွေ±ကွန်းမန့်မှာ ထပ်ထည့်ချင်သေးလဲ?
< Unicode Version>
လူတျောတျောမြား ယုံကွညျခကျြလှနျကဲလို့ ရှုံးနိမျ့နကွေတာပါ။ ထူးဆနျးသှားပါသလား?
ဟုတျပါတယျ လှဲမှားစှာ ယုံကွညျခွငျး “False Belief ” လို့ချေါပါတယျ။
Coca Cola ဆိုတဲ့ နာမညျကို မကွားဖူးတဲ့လူ တျောတျောနညျးပါလိမျ့မယျ။နောကျပွီးတော့ ဒီအခြိုရညျကို စထုတျတဲ့လူကို လူခမျြးသာစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတဈဦးလို့ သိထားကွပါလိမျ့မယျ။
တကယျစခဲ့တဲ့လူက ဆေးဝါးပညာရှငျတဈဦးဖွဈပွီး ဓာတျခှဲခနျးထဲမှာ မတျောတဆဖျောစပျမိတဲ့ အခြိုရညျတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ အိမျနီးခငျြးတှကေို တဈခှကျကို ၅ဆငျ့နဲ့ စရောငျးခဲ့ပါတယျ။ အမှနျပါပဲ.. စရောငျးတဲ့ ပထမဆုံးနှဈမှာ ၂၅ဘူးသာရောငျးရပွီး ၀ငျငှေ ၅၀ဒျေါလာနဲ့ ကွျောငွာခ ရ၅ ဒျေါလာကုနျခဲ့ပါတယျ။ သဘောကတော့ ခှကျခှကျလနျအောငျရှုံးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
နှဈအနညျးငယျကွာတော့ အဲဒီအခြိုရညျကို လူခမျြးသာ တဈယောကျက ဒျေါလာ ၂၃၀၀ နဲ့ပွနျဝယျခဲ့ရာကနေ ကြှနျတျောတို့အားလုံးသိထားတဲ့ Coca Cola ဆိုပွီးဖွဈလာပါတော့တယျ။
✔ ပထမတဈခုက သေးသေးလေးကစတငျရလို့ သေးသေးလေးပဲဖွဈမယျမထငျပါနဲ့။ လူတှထေငျနကွေတာက ကွီးမားတဲ့အောငျမွငျမှုတှရေဖို့ ခပျကွီးကွီးအရာတှကေနစေရမယျလို့ ယုံကွညျနကွေတာပါပဲ။ ဒါဟာအပျေါမှာ ပွောခဲ့တဲ့ False Believe ရဲ့ အကောငျးဆုံးသာဓကပါပဲ။
✔ ဒုတိယတဈခုကို မပွောခငျ မေးစရာရှိတာက ပထမဆုံးနှဈမှာ ၂၅ဘူးပဲရောငျးရတဲ့ အခြိုရညျကို သငျဆိုရငျ ဆကျရောငျးမှာလား? သငျခနျးစာကတော့ လူတှထေငျကွတာက ရလဒျကောငျးတှမွေငျမှ ရှဆေ့ကျဖို့ ခှနျအားရှိမယျပေါ့။ တကယျက ရှဆေ့ကျသှားမှ ရလဒျကောငျးတှေ ဖွဈလာမှာပါ။
✔ နောကျဆုံးသငျခနျးစာကတော့ Coca Cola လိုအရညျအသှေးမွငျ့ပစ်စညျးကို ၂၅ဘူးပဲရောငျးရလို့ လကျလြှော့မယျဆိုရငျ ဘာဆကျဖွဈသှားမလဲ? ဘာမှဆကျမဖွဈပါဘူး။ တခါတလေ သငျ့အကွံဉာဏျ၊ လုပျရပျတှေ မှနျကနျကောငျးမှနျနပေမေဲ့ လူတှဆေီက ခကျြခငျြကွီး ထောကျခံအားပေးမှုရမယျလို့ မမြှျောလငျ့ပါနဲ့။ တခြို့အရာတှကေ အခြိနျနဲ့ နညျးလမျးလိုပါတယျ။
မိတျဆှတေို့ကော ဘာသငျခနျးစာတှေ±ကှနျးမနျ့မှာ ထပျထညျ့ခငျြသေးလဲ?
“အောင်မြင်ခြင်းသို့ တွန်းအား (သို့မဟုတ်) စာဖတ်ခြင်း”
by MM Book City · Published June 3, 2018
အကောင်းဆုံးပျံ အမှန်ဆုံး စီး
by MM Book City · Published March 27, 2019
Next story မိတ်ဆွေကောင်း မပီသသူကို မပေါင်းနဲ့
Previous story သူငယ်​ချင်းများအတွက်